Umculo uholele uZama ukuthi alahle amaphupho akhe okuba ngudokotela | Scrolla Izindaba
Umculo uholele uZama ukuthi alahle amaphupho akhe okuba ngudokotela
Njengentombazane yesikole, uZama Khumalo wayezibona engudokotela egqoke ingubo emhlophe efake ne-stethoscope entanyeni yakhe.
Kodwa ama-Idols afike akushintsha konke lokho.
Njengamanje lo mculi oneminyaka eyi-18 wase-Emalahleni eMpumalanga ufuna ukufundela umculo hhayi okunye. Ufuna ukungena esigabeni somhlaba ngezwi lakhe elimtoti.
“Ngemuva kokuqeda isikole ngowezi-2018 ngathatha i-gap year ngoba bengingenaso isiqiniseko sokuthi ngifuna ukufunda ini. Ngemuva kwalokho umngani wami nobaba bangikhuthaza ukuthi ngiyongenela ama-Idols,” kusho uZama etshela abakwa-Scrolla.Africa.
Uthe, wayengenantshisekelo ngoba wake wazama ukungenela ama-Idols nyakenye ngeSizini ye-15 kodwa akazange aze afike kuma-TV auditions.
“Ngaphoxa futhi ngakholwa ukuthi ama-Idols akusiyo into yami. Kodwa ubaba nomngani wami babelokhu bengigqugquzela. Ngagcine sengivuma ukwenza ama-auditions ngenxa yabo,” kusho uZama.
UZama wamangala ngesikhathi efinyelela kuma-auditions avela kumabonakude, kodwa wacabanga ukuthi mhlampe uzophuma ngeviki uma sebehlangene bonke nabanye e-theatre.
“Ukuya kowamanqamu ama-Idols bengingakucabangi nhlobo,” kusho uZama.
UZama uthe, ukungena kwisigaba sabayi-16 kwakungathi iphupho.
“Kuyo yonke indlela engiyihambile kulo mncintiswano ubaba wami ubengikhuthaza ethi, ngingakwenza lokhu,” kusho uZama.
“Ngibe sengihlala phansi ngabona ukuthi ngazalelwa ukuba ngumculi.”
Ingoma kaZama i-Ndizobizwa iyona emvulele indlela yaqala nohambo lwakhe kwezomculo.
Uhlela ukungena estudiyo bese eqala ukuqopha i-albhamu ephelele.
“Angifuni ukukhetha uhlobo olulodwa lomculo ngoba ngikholwa ukuthi izwi lami lingacula noma yiliphi iculo. Ngifuna ukuqhubeka nokumangaza abalandeli bami,” kusho uZama.